फोटोशपको साथ फिल्म पोस्टर डिजाइनिंग: रेड स्प्यारो | क्रिएटिव अनलाइन
El सिनेमा पोस्टर डिजाइन एक सम्पूर्ण रचनात्मक संसार हो जहाँको काम डिजाइनर मुख्य मध्ये एक प्रतिबिम्बित छ विज्ञापन मिडिया जुन एउटा ग्राफिक तत्वको रूपमा सेवा गर्ने लक्ष्य राख्दछ चलचित्रको प्रमोशन। हामीले कुरा गरिरहनु भएको विधा अनुसार धेरै ग्राफिक शैलीहरू जुन मानकको आधारमा हुन्छन्, ग्राफिक डिजाइनरले हासिल गर्नै पर्छ को सार प्रतिबिम्बित गर्नुहोस् फिलिम यस्तो तरिकाले कि यो दृश्यात्मक आकर्षक हो र प्रयोगकर्ताको प्रति इमिटर बन्छ।
हामी जहिले पनि फिल्म पोस्टर मन परेको छ तर उनीहरूको पछाडि के छ? यो कसरी गर्ने? यसमा पोस्ट यसको पछाडिको ग्राफिक भाग हेरौं चलचित्र पोस्टर सिर्जना गर्दै। हामी कसरी हेर्नेछौं पुन: निर्माण गर्नु त्यो पोस्टर प्रयोग गर्दै Photoshop यो तस्विर रिचचिंग प्रोग्राम कसरी प्रयोग गर्ने सिक्ने फरक तरीकाको रूपमा। हामी ध्यान केन्द्रित गर्दैनौं (कम्तिमा यस पहिलोमा) पोस्ट) पोस्टर पछाडिको पेशेवर भाग देखाउनको लागि तर हामी यो निर्दिष्ट पोस्टर कसरी पुन: सिर्जना गर्ने भनेर देखाउनेछौं। भविष्यमा पोस्ट हामी हेर्नेछौं कसरी स्क्र्याचबाट पोस्टर सिर्जना गर्ने, विचारहरूको वैचारिक अंशबाट तिनीहरूको डिजिटल उत्पादन सम्म। यदि तपाइँ यो एक चाखलाग्दो विषय हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तल टिप्पणी लेख्न नहिचकिचाउनुहोस् पोस्ट।
हाम्रो पोस्टरको डिजाईन सुरू गर्न हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो नयाँ कागजात सिर्जना गर्नुहोस् en Photoshop मानक A4 ढाँचाको साथ।
यो मा पोस्ट हामी निम्न प्रयोग गर्न सिक्नेछौं उपकरणहरू:
हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो फोटो खोल्नुहोस् जुन हामी हाम्रो पोस्टरको लागि प्रयोग गर्ने छौं। यो पोष्टर बनाउन हामीले मूल पोस्टरको जस्तो फोटो छनौट गर्नुपर्दैन किनकि हाम्रो विचार सिक्नुपर्दछ त्यो शैली सिर्जना गर्नुहोस्, हामी विस्तृत रूपमा पोस्टर प्रतिलिपि गर्न खोज्दैनौं। पोस्टरको नक्कल गर्न चाहेको मामलामा हामीले फोटोग्राफिक सेसन मूल फोटोग्राफरको जस्तै गर्नु पर्छ।
यस अर्को चरणको लागि Photoshop हामीले गर्नुपर्ने भनेको एउटा प्रदर्शन गर्नु हो छविमा काट्नुहोस्यसको लागि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्दछौं बहुभुज लूप। इरेजर वा अन्य चयन उपकरण प्रयोग गर्न पनि सम्भव छ जुन छविलाई काट्न मद्दत गर्दछ।
हामीले गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो पृष्ठभूमि भर्नुहोस् रातो, यसको लागि हामीले गर्नै पर्छ नमूना लिनुहोस् मूल पोस्टरको रातो र colorको (हामी Alt क्लिक गर्नुहोस्), हामी यो अंश बनाउन सक्छौं बिभिन्न तरिकाहरू: podemos मानहरुको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र color्ग र त्यसपछि नयाँ पृष्ठभूमिमा तिनीहरूलाई थप्नुहोस्, वा हामी गर्न सक्दछौं र color नमूना लिनुहोस् र त्यसपछि हाम्रो नयाँ र forको लागि आधारको रूपमा त्यो स्विच प्रयोग गर्नुहोस्।
हामी ड्रॉपर चयन गर्दछौं र हामी मूल पोस्टरबाट रातो र theको नमूना लिन्छौं।
एक पटक हामीसँग सेलेक्ट गरिएको नमूना छ, अर्को कुरा हामीले गर्नुपर्दछ हाम्रो पृष्ठभूमि भर्नुहोस्यसको लागि हामी माथि मेनुमा जान्छौं र विकल्प छान्छौं सम्पादन / भर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि नयाँ विन्डो खुल्नेछ, समाप्त गर्न हामी रंग विकल्प छान्छौं।
हामी र sample्ग स्क्वायर प्रयोग गर्दछौं दोस्रो नमूना लिनका लागि जब र take्ग चयन विन्डो खुल्दछ।
पृष्ठभूमि र changing परिवर्तन गरेपछि हामी जान्छौं फोटोग्राफी संग काम। हामी मूल पोस्टरमा देख्न सक्छौं, छविमा रातो रंगको प्रभावशाली साथै पृष्ठभूमि पनि छ, जुन फोटोग्राफी र पृष्ठभूमिको बीचमा एक किसिमको फ्यूजन सिर्जना गरेर हासिल गरिएको हो। यो गर्नका लागि Photoshop हामीले गर्नुपर्ने भनेको छ तह मोड परिवर्तन गर्नुहोस् सामान्यबाट गुणा गर्न।
हामीसँग पहिले नै हाम्रो पोस्टर व्यावहारिक रूपमा समाप्त भइसकेको छ, केवल हराएको चीज नै छ फन्ट थप्नुहोस् सकेसम्म समान र काम पूरा भयो।
हामीले बिभिन्न प्रयोग गर्न सिकेका छौं को उपकरणहरु Photoshop एक व्यावहारिक तरिकामा जब एक गर्दै चाखलाग्दो व्यायाम एक आधारको रूपमा फिल्म पोस्टर प्रयोग गर्दै। चलचित्र पोस्टरहरू हरेक डिजाइनरका लागि धेरै चाखलाग्दो हुन्छन्, यस प्रकारको डिजाइनमा भाग लिन सक्षम हुनुको विचार आकर्षक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » चलचित्र पोस्टर डिजाइन: रातो भँगेरा
Ic आइकनहरू जुन तपाईले यो अनुप्रयोग खोल्नु भन्दा पहिले के हो भनेर चिन्नुहुनेछ